Fanatanterahana fivoriana mahomby | Reef Resilience
Ho an'ny fivoriana iray mahomby dia zava-dehibe ho an'ny mpanamora ny:
Manaova fanantenana mazava
Mitadiava fanapaha-kevitra mahomby amin'ny fiaraha-miasa
Omeo valiny ny mpandray anjara
Sary © Stephanie Wear / TNC
Ny dingana manan-danja mba hametrahana fanantenana tsy tapaka dia ahitana ny famantarana:
Tanjona voafaritra izay ho tratra amin'ny fivoriana
Ny anjara asan'ny fandraisana anjara, na alohaloha na mandritra ny fivoriana
Fametraham-panantenana ny zavatra andrasana amin'ny fotoana mety
Miresaha mazava amin'ireo mpandray anjara mba hiomana amin'ilay fivoriana
Zava-dehibe ihany koa ny manazava ny fomba hangonina sy hampiasaina-alohan'ny, mandritra sy aorian'ny fivoriana. Ohatra, hisy ny tatitra farany na ny fivoriana manaraka na ny hetsika? Ny mpandray anjara dia tokony hahafantatra raha toa ka ny fanapaha-kevitry ny fanapahan-kevitra amin'ny fivoriana dia ho farany, raha toa ka ny fangatahana ihany no horaisina ho tolo-kevitra fotsiny.
Ny fitantanana ny fotoana dia manomboka amin'ny fametrahana fotoana voafetra ho an'ny lohahevitra tsirairay na ny asa atao ao amin'ny fandaharam-potoana. Tena manampy tokoa ny fampiharana asa na fampisehoana alohan'ny fivoriana (raha azo atao) mba hitsapana ny fanombanana ny fotoana. Ataovy azo antoka ny hampiofana ireo mpanolotra rehetra amin'ny fotoana fanolorana fotoana ary manantitrantitra ny filàna ny hijanonany amin'ny fotoana.
Tsara ny manendry ny ora fisakafoana miaraka amin'ny fahefam-pahefana hanakana ny olona, ​​amin'ny fampitandremana, rehefa miakatra ny fotoana, ary manome famantaranandro hita ao amin'ny efitrano. Rehefa mandamina fotoana dia matetika ny mpandinika efa za-draharaha no mahatsapa fa ilaina ny milefitra. Amin'ny fotoam-pivoriana, ny mpandrindra dia mety mila manova ny fandaharam-potoana mba hahatratrarana ny tanjona amin'ny fivoriana. Tafiditra ao anatin'izany ny famaritana hoe inona ireo lahasa fandaharam-potoana dia mety ho voatazona na alefa amin'ny endrika hafa (ohatra, nomena anjara ho an'ny mpandray anjara, na mpandray anjara iray ho amin'ny fikarohana na fanapahan-kevitra fohy).
Raha miresaka ela kokoa noho ny fotoana voatondro ny adihevitra momba ny vondrona, ary misy ny ahiahy momba ny tsy fitaterana ny zavatra rehetra ao amin'ny fandaharam-potoana, ny tetika tsara dia ny mamerina mijery ireo singa manan-danja amin'ny tarika ary manontania azy ireo ny fomba hampiasany ny fotoana sisa tavela. Izany matetika dia manampy ny tsirairay hiverina amin'ny làlana.
Fametrahana fitsipika fototra
Ny fametrahana ny 'fitsipika momba ny tany' dia fitaovana iray manan-danja indrindra hanaovana fivoriana mahomby. Na dia ny fahatsaran'ny fahamaroan'ny fitsipika aza, dia ilaina ny manintona ny mpandray anjara amin'izy ireo amin'ny fiantombohan'ny fivoriana. Izany dia mametraka ny fifanarahana amin'ny vondrona momba ny fomba hiarahany miasa sy manampy amin'ny fisorohana ireo olana. Ny ohatra momba ny fitsipika momba ny tany dia tsy misy telefaona na pagers (na mametraka azy ireo ho mangina / vibration), miverina miala amin'ny fotoana fialan-tsasatra, mandray anjara, tsy manelingelina, maneho fanajana ireo mpandray anjara hafa, ary mifantoka amin'ny tolotra fandaharam-potoana. Misy fitsipika maro hafa azo ampiasaina ary matetika manampy amin'ny vondrona ny manapa-kevitra amin'ny fitsipika momba ny tany atsy am-piandohan'ny fivoriana.
Manao fanapahan-kevitra momba ny vondrona
Misy fomba maro ahafahana manampy ny vondrona amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra miaraka. Ny fampiasana matetika indrindra dia ny fitsaboana arahin'ny arabe sy ny fifidianana; fanapahan-kevitry ny fifanarahana; fakan-kevitra; ary laharam-pahamehana. Ho fampahalalana momba ny famaritana ny dingana mifanaraka amin'ny fanampiana ireo vondrona amin'ny fanapahan-kevitra momba ny fiaraha-miasa, dia jereo ny toro-làlana Six Decision Making Options ( misokatra amin'ny varavarankely vaovaoPDF, 33k). jereo Fampandrosoana ho an'ny fomba hafa hanampiana ireo vondrona hahatanteraka ireo tanjona amin'ny fihaonana.
Mba hahalavorary kokoa ny fivoriana ho avy, dia manampy amin'ny fanangonana ny fampahalalana momba ny fanombanana avy amin'ny fihaonana ny mpandray anjara (oh misokatra amin'ny varavarankely vaovaotombana tenymanokatra fisie PDF ). Maro ny fomba maro hanombanana ny fivoriana; Ohatra, a misokatra amin'ny varavarankely vaovao"Plus / Delta"manokatra fisie PDF dia ahitana ny fangatahana ireo mpandray anjara mba hanome valin-kevitra tsara momba ny fivoriana (fitongilanana) ary fanehoan-kevitra momba ireo fanovana izay azo atao hanatsarana ny fivoriana amin'ny hoavy (deltas).
Fiovana eo amin'ny sehatry ny ranomasina Ny sombintsombiny dia nalaina tamin'ny fitaovam-piofanana NOAA izay ampiasaina amin'ny Fandaharam-potoanany sy ny fanamorana ny fivoriana fiaraha-miasa
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFanapahan-kevitra enina fanapahan-kevitramanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFamaritana momba ny Evaluation - pejy 22-23 avy amin'ny fampidirana ny drafitra sy fanamorana ny fahombiazanymanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFikarakarana sy fanamafisana ny fivoriana mahombymanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFihaonan'ny Efroymson Fellowshipmanokatra fisie PDF